RASMI: Éric Abidal oo loo magacaabay Agaasimaha ciyaaraha cusub ee kooxda Barcelona – Gool FM
(Barcelona) 07 Juunyo 2018. Barcelona ayaa si rasmi ah u shaacisay in ay u magacawday laacibkeeda hore ee reer France Éric Abidal agaasimaha ciyaaraha cusub ee kooxda si uu u noqdo badalka Robert Fernandez, kaasoo heshiiskiisa dhacayo dhamaadka bishan socota.
War rasmi ah ee lagu qoray website-ka kooxda Barcelona ayaa lagu yiri: “Barcelona waxay ku dhawaaqday in aysan heshiiska u kordhin doonin Robert Fernandez, kooxda waxay kaga mahad celineysaa shaqadii adkeyd uu soo qabtay sanooyinkii lasoo dhaafay, waxaana u rajeeneynaa mustaqbal wanaagsan”.
“Éric Abidal ayaa la wareegi doona shaqada agaasmiha ciyaaraha kooxda koowaad ee Barcelona, si uu u noqdo badalka Robert Fernandez, waxaana si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa Isniinta soo aadan”.
Abidal ayaa soo xirnaa maaliyada kooxda Barcelona mudo dhan 6 sano, wuxuuna kula guuleestay 4 jeer ee ah horyaalka La Liga, 2 jeer UEFA Champions League, sidoo kale 4 mar ee ah Supercopa de España, UEFA Super Cup 2 jeer, sidoo kale koobka kooxaha aduunka iyo Copa del Rey.
Mid ka mid ah majaladaha dalka Faransiiska oo u doortay Zidane iyo Messi macalinka iyo xidigka ugu fiicnaa xili ciyaareedkan